Mmanụ Masị Ọcha Bathroom Foset 4 Inch
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Bathroom Sink Foset 4 Inch Centre Oil rubbed Bronze
WOWOW Bathroom Sink Faucet 4 Inch Center Mmanụ a na-ete mmanụ
gosiri 5.00 nke 5 dabeere na 17 ahịa Fim
(17 ahịa reviews)
WOWOW pesenti 100 nke a nwalere - a na-enyocha mmiri niile na-arụ ọrụ n'okpuru nnukwu mmiri dị elu iji mee ka ogo na ntachi obi dị elu. 4 nke anụ ọhịa ahụ jupụtara ebe ịsa ahụ pọpụlị, ọla kọpa dị elu magburu onwe ya bụ nke ikpeazụ emebere maka Ndụ nke oge a.
Ntụziaka nwụnye 232120RB
Nkọwapụta ụlọ ime ụlọ ojii na-acha ọcha na 2321200RB: Ọ bụrụ na ị na-atụle ngwaahịa ọhụrụ anyị, biko egbula oge kpọtụrụ anyị maka ọnụahịa ọnụahịa. CENTERSET; Faucet imewe classique na mkpanaka mbuli elu na elu gbapụta. Ime ụlọ ịwụ ahụ na mmiri nwere mmiri abụọ HATLES FAUCET BATHROOM: Ugbo mmiri ejiri aka abụọ dozie mmiri na njikwa mmiri. IKWU EGO NA-EKPERE MAKA AINLỌ EGO: :lọ ịsa ahụ mmanụ a na-ete n'ime mmiri gụnyere mmiri mbido mmiri, mmiri na-esite na mgbata ahụ site na ịpịgharị mkpanaka dị elu, na-egbochi iwepu aka gị. MAKA FAUCET OIL RUBBED BRONZE: abụọ na-edozi faucet imewe ụdị kpochapụwo ochie. Na-alụ ọgụ corrosion. Ckgbọ mmiri awụliri elu nke oche ụlọ dị mma maka ụlọ ịgbazite, ogige ọhụrụ, ụlọ na-alụbeghị di, ebe a na-anya ụgbọ ala, ebe ndị njem na ebe obibi. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla.
SKU: 2321200RB Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: uclọ ịsa ahụ batrị, lavatory etiti, anụ ahụ ụlọ ịsa ahụ ọkụ, Bronze Mmanụ
9.2 x 9.1 x 3.9 sentimita
Ọ bụ ọdịdị m kachasị amasị m. Ọ nwere ezigbo nkwakọ ngwaahịa, ọnya adịghị na ọdịdị, ọ dịkwa mfe ịwụnye. Ọnụahịa ahụ dị mma.
Di m nwere ike wụnye pụtara mfe! Enweghi m obi uto na nzụta a. O yiri ka ọ dị oke ọnụ karịa ka ọ dị ma enwere m ọtụtụ ekele maka ya. Top notch ahịa s
Enwere afọ ojuju na ọkpọkọ mmiri a. You gbanyụọ pọmpụ ahụ, ndọta ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike idobe fesa ahụ n'ime. Enweghị m mkpesa banyere ọkpọkọ.
O siri ike ịchọta ezigbo akara kichin kichin nke na-adịghị ada azụ. Enwere m naanị ọkpọ mmiri ihe dị ka otu izu ugbu a ma ọ rụọ ọrụ nke ọma ugbu a.
Nnukwu ụlọ ịwụ ahụ mara mma dị mfe iji wụnye. Azụrụ m ya maka onye na-agbanwe mmiri mmiri na-enye m mmiri zuru oke! Ọ masịrị m nke ukwuu!
Mfe echichi na anya dị ukwuu! Nnọọ classy anya maka ọkara na-eri nke ihe ị ga-ahụ na ụlọ mma na ụlọ ahịa
O siri ike ịkụ ọkpọ mmiri a maka ọnụahịa ahụ. Obi dị m ezigbo ụtọ na nzụta m.
Bịara ọsọsọ karịa ụbọchị nnyefe e mere atụmatụ ya. Kwadoro nke ọma. Super dị mfe iji wụnye, ma mara ezigbo mma. M dochiri a Delta foset, nke na-eri 4X dị ukwuu, na nke ọhụrụ a dị ka ọmarịcha ma dị mfe ịwụnye. Ọ masịrị nnọọ nke ukwuu.
Ngwaahịa mara mma nke dị mfe ịwụnye. Nice gwụchara ma rụọ ọrụ nke ọma.
Oke mma dị mma, bịara na ngwugwu nchekwa dị mma. Ọmarịcha mmegharị nke ịlesụ na mkpọchi nke igbapu. Ga-azụta ọzọ ma tinye ya na ihe dịka otu ọnwa.
Akwa ngwaahịa !! Super dị mfe ịwụnye. Eji m ya dochie foset na RV ma ọ dị mma nke ukwuu, a na m azụta ihe iji dochie pọmpụ ụlọ ịsa ahụ n'ụlọ m.
Qualitydị mma dị mma, na-eme ka mmiri dị mma, dị mfe ịtọpụ onye nhazi, ọmarịcha mma. Chọpụtara na otu isi dị nwayọọ karịa nke ọzọ. Kwesịrị ịbụ ndozi dị mfe. Na mkpokọta, nnukwu ego maka WOWOW enweghị ndakpọ olileanya ọ bụla. Nnukwu ịzụta!
Obi ụtọ na àgwà, anya na ịdị mfe nke echichi… Na m zụtara nke abụọ ọzọ sink!
Mmiri gbanye / gbanyụọ bụ eziokwu. Lee dị ọcha ma dịkwa mma. Hụrụ ịhụnanya na-asọpụta! Dị mfe ma dị irè karịa ochie menjuobi-sere igbapu na ọ dochie!
Ntinye dị mfe na m mere ka nwa m dị afọ 14 tinye ya (ya na nlekọta m). Obi dị m ezigbo ụtọ na nzụta a.
The price bụ nnọọ asọmpi na-amasị m strainer imewe. Ọkpụkpọ nke ejiri ngwugwu mara nke ọma. Ndị na-ere ere biko agbanwela nkwakọ ngwaahịa ahụ. nnukwu ọrụ. ejighi n'aka ma ihe ndị a dị jụụ karịa ọkpọkọ ọkpọ ikpeazụ m nwere.
Kpamkpam mara mma! Na-arụ ọrụ nke ọma. Ogologo ma rute n'ihu n'ihu nke m nwere na mbụ. Zuru okè maka ngwa m. Ogo zuru ezu! Ọ bụghị plastic. Ibu nnukwu ọrụ! Obi dị m ezigbo ụtọ na m zụrụ!
Igwe mmiri a dị elu. Agbalịrị ịzụta ọzọ na ha niile apụla. Echere m na ọ bụghị naanị m nwere mmasị na ya.
Akwagara m n'ụlọ m nwere mposi na-asọ oyi. Nke a dị mfe itinye ma ọ dị ịtụnanya!
Matt Black Tall Basin Mixer Mgbata